ⓘ ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း အဆင့်
ထိုင်း တော်ဝင်အဆောင်ယောင် ဘွဲ့တော်များ
မြင့်မြတ်သည့်ထိုင်းတော်ဝင်အဆောင် အယောင်ဘွဲ့တော်များသည် တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးအဆင့်ဆင့်အဖြစ် တြိုင်လိုကနက်ဘုရင်လက်ထက် တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စနစ်ကိုထိုင်းဘာသာစကားအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပဒေသရာဇ် ၊ စကဒီနာ နှင့်ညီမျှသည်။ဧကရာဇ်နှင့် မြင့်မြတ်သည့်သားတော်များစွာရှိခဲ့သည့်အတွက်တော်ဝင်အစဉ်အလာများသည် အနောက်တိုင်းအယူအဆနှင့်ဆင်တူသည်။ ဂုဏ်ထူးအဆင့်အတန်း တစ်ခုသည်အစ အဆုံး၌သတ်မှတ်ထားမည်မဟုတ်သော်လည်း နာမည်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။တော်ဝင်ဘွဲ့ထူးတပ်သူများကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအမည်များဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးချီးမြှင့်သော ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။ ဘုရင်သည် ဘွဲ့ထူးများကို သာမန်မည်သူ့ကိုမျှမချီးမြှ ...
1. အဓိက အဆင့်များ
ကားလ် လင်းနီးယပ် Carl Linnaeus သည် "Systema Naturae" ကဲ့သို့သော သူ၏ ထင်ရှားသော စာအုပ်များတွင် လောက kingdom၊ မျိုးပေါင်း class၊ မျိုးစဉ် order၊ မျိုးစု genus၊ မျိုးစိတ် speciesနှင့် မျိုးစိတ်ထက် တစ်ဆင့်နိမ့်သော အဆင့်တစ်ခု စုစုပေါင်း ၆-ဆင့် ပါဝင်သော ခွဲခြားမှုစနစ်ကိုသာ အသုံးပြုသွားခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ္တဗေဒအမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း International Code of Zoological Nomenclature
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေညှိ၊ မှို နှင့် အပင်အမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း
တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့အရ အဓိကအမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ချက် ၇ ခုမှာ လောက kingdom၊ မျိုးပေါင်းစု phylum၊ မျိုးပေါင်း class၊ မျိုးစဉ် order၊ မျိုးရင်း family၊ မျိုးစု genus၊ မျိုးစိတ် species တို့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းတို့တွင် မဖေါ်ပြထားသော်လည်း ကားလ်ဝို့ဇ် Carl Woese မှအဆိုပြုထားသည့်) နယ်ပယ် domain သို့မဟုတ် ဒိုမိန်းကို ယခုအခါ အခြေခံအဆင့်အဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း နယ်ပယ် domain သို့မဟုတ် ဒိုမိန်း အဆင့်သည် ၁၉၇၄-ခုနှစ်တွင် မော Royall T. Moore မှ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော ဒမင်းနီယမ် အင်္ဂလိပ်၊ dominion သို့မဟုတ် လက်တင်၊ dominium နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူ စကားလုံးဖြစ်သည်။
2. သတ္တဗေဒအသုံး အဆင့်များ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ္တဗေဒအမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း International Code of Zoological Nomenclatureတွင် မျိုးရင်းကြီး superfamily၊ မျိုးရင်း family၊ မျိုးရင်းသေး subfamily၊ မျိုးဇာတ် tribe၊ မျိုးဇာတ်သေး subtribe၊ မျိုးစု genus၊ မျိုးစုသေး subgenus၊ မျိုးစိတ် species၊ မျိုးစိတ်သေး subspecies တို့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ ရှိသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတ္တဗေဒအမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းမှ သိပ္ပံအမည်များကို "မျိုးရင်း-အုပ်စုအမည်များ"၊ "မျိုးစု-အုပ်စုအမည်များ"နှင့် "မျိုးစိတ်-အုပ်စုအမည်များ"ဟူ၍ အုပ်စုခွဲထားသည်။ ဤစည်းမျဉ်းတွင် အောက်ပါ မျိုးရိုးခွဲအဆင့်များကို အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
မျိုးရင်းသေး Subfamily မျိုးဇာတ် Tribe မျိုးဇာတ်သေး Subtribe
3. ရုက္ခဗေဒအသုံး အဆင့်များ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေညှိ၊ မှို နှင့် အပင်အမည်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း ၏ စာပိုဒ် ၃.၁ အရ အရေးကြီးဆုံး အဆင့်များမှာ လောက kingdom၊ မျိုးပေါင်းစု division or phylum၊ မျိုးပေါင်း class၊ မျိုးစဉ် order၊ မျိုးရင်း family၊ မျိုးစု genus၊ မျိုးစိတ် species တို့ဖြစ်ကြသည်။ စာပိုဒ် ၄.၁ အရ ဒုတိယအဆင့်များမှာ မျိုးဇာတ် Tribe၊ section၊ series၊ varietyနှင့် form တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဤစည်းမျဉ်းတွင် အောက်ပါ မျိုးရိုးခွဲအဆင့်များကို အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ဒုတိယ အဆင့်များ နောက်ထပ် အဆင့်ခွဲများ
လောက kingdom သို့မဟုတ် regnum
မျိုးပေါင်းစု division သို့မဟုတ် phylum သို့မဟုတ် divisio
မျိုးပေါင်းစုသေး subdivisio သို့မဟုတ် subphylum
မျိုးပေါင်း class သို့မဟုတ် classis
မျိုးစဉ် order သို့မဟုတ် ordo
မျိုးရင်း family သို့မဟုတ် familia
မျိုးရင်းသေး subfamilia မျိုးဇာတ် tribe သို့မဟုတ် tribus မျိုးဇာတ်သေး subtribus
မျိုးစု genus သို့မဟုတ် genus
မျိုးစုသေး subgenus section sectio subsection series subseries
မျိုးစိတ် species သို့မဟုတ် species
မျိုးစိတ်သေး subspecies variety varietas subvarietas form forma subforma
Wikipedia: ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း အဆင့်